iOS 8.3 dia manakana ny fidirana amin'ny rindranasa | Vaovao IPhone
Na eo aza ny zava-misy fa ny iOS dia rafitra mihidy mihidy izay manakana ny fidirana amin'ny rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo, raha tsy misy ny Jailbreak dia nisy foana ny efitrano fandefasana amin'ny lafiny fampiharana toa ny iFunBox, iExplorer na iMazing ( sary) izay namela anao hiditra amin'ny rafitra fisie, na dia tsy feno toy ny jailbreak aza. Na izany aza, fanovana lehibe ny fahatongavan'i iOS 8.3, ary izany no izy Tsy afaka miditra amin'ny rindranasan'ny iPhone na iPad intsony ianao amin'ny fampiasana ireo mpikaroka rakitra ireo.
Ny iOS 8.3 dia namarana ny fahafahantsika mifehy ny angona ao anatin'ny rindranasa sy lalao napetraka ao amin'ny iPhone na iPad. Apple dia nanakana ny fidirana amin'ny lahatahiry misy fampiharana tahaka ity kinova iOS ity. Talohan'izay dia nanakana ny fanoratana fotsiny izy ireo. Ankehitriny dia tsy voafehinay intsony ny fampiharana apetraka amin'ny fitaovantsika. Eo am-panatanterahana izany izahay. Mandra-pahatongorantsika azy io, iFunBox dia tsy afaka miditra amin'ny rindranasa raha tsy jailbroken ilay fitaovana.
Izao dia izao ny rindranasa izay manana ny safidy "Hizara amin'ny iTunes" ihany no mihetsika Ho azon'ireto mpikaroka rakitra ireto izy ireo. Ity safidy ity dia manondro ny fahaizana manampy rakitra avy amin'ny iTunes, toy ny amin'ny fampiharana toa ny VLC. Ny sisa amin'ireo rindranasa dia hikatona tanteraka ny fidirany ary tsy hisy fomba hamakiana ny angona amin'ny alàlan'ny fitetezana an'io karazana io. Fipoahana mora vidy tokoa ho an'ireo mpamolavola ireo rindranasa ireo izay azo antoka fa mitady ny fomba hamahana ity olana ity izay miantraika mivantana amin'izy ireo. Izahay dia manitrikitrika fa izay rehetra nanao Jailbreak dia tsy manana olana kely akory ary afaka manohy miditra amin'ny rafi-drakitra iray manontolo toy ny teo aloha. Mandritra izany fotoana izany, ireo efa ao amin'ny iOS 8.3 dia afaka miandry ny famoahana ny Jailbreak fotsiny, izay mety maharitra ela kokoa noho ny faniriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » Ny iOS 8.3 dia manakana ny fidirana amin'ny rindranasa
Lohahevitra 10 Winterboard hanomezana endrika vaovao ny iPhone
Ahoana ny fomba fanaovana backup backup iPhone